नवीन विभासको रोल्पा सुइना पोखरामा - Samachar PatiSamachar Pati
नवीन विभासको रोल्पा सुइना पोखरामा
पोखरा, २६ फागुन । कथाकार नवीन विभासको कथाकृति ‘रोल्पा सुइना’को शनिबार पोखरामा चर्चा गरिएको छ । रयाण्डम रिडर्स सोसाइटी अफ् नेपालको नियमिति कार्यक्रमको ८२ औँ शृङ्खलामा विभासको कृतिमाथि उपन्यासकार तथा समालोचक नेपालप्रकाश अधिकारीले चर्चा गर्नुभएको थियो । अधिकारीले जनयुद्धलाई मूल आधार मानेर लेखिएको कृतिले रोल्पाली सपना उतारेको बताउनुभयो । उहाँले प्रगतिवादी फाँटका नयाँ चमकका रुपमा विभासलाई चिनाउँदै १० वर्षे द्वन्द्व र द्वन्द्वपछिका वस्तुस्थिति बुझ्न कृति पढ्नुपर्ने सुझाउनुभयो । कलात्मक र पठनीय शैलीशिल्पले युक्त कृतिले नेपाली प्रगतिवादी साहित्यमा स्मरणीय छाप राख्ने तर्क गर्दै अधिकारीले नेपाली राजनीतिक परिवर्तन र जनअपेक्षाको प्रतिबिम्ब रोल्पा सुइनामा पाइने बताउनुभयो ।
कथाकार विभासले आफूलाई समाजले नै लेखक बनाएको बताउनुभयो । कथा भन्ने परम्पराबाट गुज्रिँदै समाजकै कथा लेख्ने क्रममा रोल्पा सुइना जन्मेको बताउनुभयो । अग्रज कथाकारहरुले हिँडेकै बाटो हिँड्न मन नपर्ने बताउँदै कथाको पनि नयाँ बाटो हिँड्ने चाहनामा किताब लेखेको उहाँले बताउनुभयो । पत्रकारितामा समेत क्रियाशील विभासले राजनीतिक बिटमा द्वन्द्वका रिपोर्टिङ गर्दा समाचारका रुपमा आउन नसकेका पात्रहरुलाई कथाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । विभासका यसअघि आधा बाटो हिँडेपछि (कथा सङ्ग्रह), मौसमका हरफहरु (कविता सङ्ग्रह), उनका गजल (गजल सङ्ग्रह), रात पनि ऐंठन परेको रातमा (निबन्ध सङ्ग्रह) लगायतका कृतिहरु प्रकाशित छन् । साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको रोल्पा सुइनामा ३७ ओटा कथाहरु सङ्गृहीत छन् ।
सम्पूर्ण उपस्थित पाठकहरुलाई अध्यक्षता गराइएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव अनुपमणि अधिकारीले गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्ष रुपिन्द्र प्रभावीको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा गनेस पौडेल, दीपक पराजुली र सुरेश रानाभाटले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । आगामी चैत २४ गते शनिबार कवि विनोदविक्रम के.सी.को एकल कविता वाचनसँगै गुरुङ सुशान्तले कविताहरुमाथि चर्चा गर्नुहुने अध्यक्ष केशवशरण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
स्नो भ्युको २२ औ अभिभाबक दिबस सम्पन्न
कसरी ? समात्यो त ! प्रहरीले श्रीया बिकको हत्यारा यति सजिलै
तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected]mail.com मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।